FRP sheet daylighting WW1025 - Shiinaha Hubei Shengyu Dhismaha Qalabka
FOB Price: 2.99-8.99 / Mitir / mitir oo laba jibbaaran
sheet daylighting FRP waxay, sidoo kale loo yaqaan Maro adag xoojiyeen sheet caag daylighting ah, ka kooban oo ka mid ah-waxqabadka sare film ilaaliya, cusbi caag roodhida iyo giberglass.Popular ay stablility iyo cimri dherer, waxaa si weyn loo isticmaalaa in stadium, aqalka dhirta lagu koriyo, madadaalo, waayo Saanqaag Fidlo ah iyo derbiyada.
model dhumucdiisuna width cover Width Length miisaanka color
TT980 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm 980mm 900-1200mm Sida loo baahan yahay 1.6-3.8KG / M White, Blue, Gray, translucent
WW1025 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm 1025mm 940-1200mm Sida loo baahan yahay 1.6-3.8KG / M White, Blue, Gray, translucent
sheet daylighting Shengyu FRP, ay xuub anti-gabowga awoodo ku dhowaad gebi ahaanba filtrate-buluug dheeraad ah iyo nolosha adeeg ka badan 20 sano.
Saamaynta High xoog
sheet daylighting Shengyu FRP, iyadoo ay qaab sare anti-saameynta iyo modulus laalaab yar yahay, waxa ay dhali karin weerarka oo dabayl xoog leh ama kuwa kale.
Kaamerada-xasiloonida caan ah
sheet daylighting Shengyu FRP, heerkulka codsi ay u dhaxeysa to110 ka-38 la size geometry deggan.
cusbi FRP waa adkaysi u kiimikooyin badan sida acid, xumadoodu, cusbo, iwm
sheet daylighting Shengyu FRP, dhaqmaadka xuub laga keeno iyo lakabka anti-gabowga, damaanad xasiloonida midabka iyo transmittance iftiinka.
dusha ka mid ah sheet saqafka waa cufan oo siman, taas oo saameyn la mid ah sida caleemaha hooska badan. Lt ma nuugo Carro iyo si fudud loo nadiifin karo by roobka.
gudbinta iftiinka nalalka sheet Shengyu FRP waa 60-85%. Light dhex sheet kala firdhiyaa nalalka FRP oo waa khafiif ah. Lt ma dhisi doono band fudud si ay u dhigi dhalaal gudaha.
Next: ASA UPVC sheet saqafka jiingado W1025
Sheet daylighting FRP The waa wax soo saarka waara daylighting loogu talagalay cimilada u resistance.install si taxadar leh ka cabsi waxyeello ama la xoqo, kaas oo saamayn laga yaabaa in ay adeeg life.In wadajir dhabta ah sheet daylighting la sheet bir midabka ah, hore la saari doonaa ka badan dambaysta ah.
Sax rakibi Habka Incrrect rakib Habka
dhexroor 1. dhaleen waa in ay ahaadaan 2-3mm badan dhexroorka fur qamaar cabsi ballaarinta uu keeno kulaylka iyo foosha ay keento qabow.
2.Waxaa dhaqe biyuhu premium waa in la dhigtaa meel u dhexaysa fur iyo sheet daylighting for saamaynta biyuhu iyo dustproof ah.
3.A koollo double-dhinac waa in lagu shubaa badan purline ka cabsi khilaaf toos ah u dhexeeya sheet daylighting iyo purline ah.
4.There waa in ay laba cajalado koolo double-dhinac ee dhabta taagan jagada wadajirka ah ee saamayn biyuhu.
5.In ee lagu kaydin jiray oo sheet daylighting ah, ha saarin stress ku dul cabsi ay breaking.
1. qayb bidix sawirka kor ku xusan waa khariidad our talinayaa, halka qayb saxda ah waa mid ka mid ah talinayn.
2.Beerta habka ugu fiican ee si wadajir ah u dhexeeya dhabta sheet daylighting iyo sheet bir midabka waa si wadajir ah u soo buuxsaday laga bilaabo tiixtiix in Eaves ama ka bilowda tiixtiix in purlines dhexe sababahan soo socda:
Waxaan sheet daylighting iyo sheet bir ah ka yar tahay processes.As wax taaj oo kale oo kala duwan aynu wada ognahay, sheet bir ah uu soo marayo geedi socodka rogid qabow, taasoo keentay in xagal intersecion yar, halka sheet daylighting iyada oo loo marayo geedi socodka thermosetting tagaa, taasoo keentay in a weyn xagal isgoyska. (Haddii xagal isgoyska waa mid aad u yar, ee ay walaaca ka harsan tahay mid aad u sarreeya, sidaas darteed waxa ay noqon doontaa waajib ah in arrinkaas ama xitaa jebiyey in isticmaalka doonaa.) sidaa darteed, waxaa sii talinayaa in ay ku riday sheet daylighting u sarreeyey sheet bir ah .
II.For sababta kor ku xusan, sheet daylighting waxay u egtahay in ay goday ah wax yar ka weyn la ruxruxo badan sheet bir ah sameeya, taas oo ka caawisaa haboon sheet daylighting gal sheet bir better.On lid ku ah, haddii sheet bir ah ayaa la saaraa sheet daylighting ah , si fiican ma ay haboon tahay, xitaa keentay in calamaada la ruxruxo arrinkaas on sheet daylighting ah, taas oo sii keeni doontaa in leakage.A biyo soo diyaariyeen joogto siman ee sheets daylighting aan inay aad u ballaaran, ama shaqaalaha dhismaha ku tuman laga yaabaa on band daylighting ee geedi socodka beerta dhismaha, taas oo u horseedi kara inay arrinkaas ka mid ah sheet daylighting ah (keenaya leadage oo biyo ah) ama xitaa shilalka (qof hoos u dhaco ka sare)!
Sawiridda Noode Normal
waveform Common sheet dhabta wadajir ah: si toos ah ku riday shabaqa daylighting eee ku xeeran shabaqa birta ka qortay sharooto caag butyl ku xidheen laabatooyinka on dhinacyada shabaqa birta; dhamaadka The weheliyaan dhererka sheet daylighting la saari doonaa on purline ah, isa soo sheet bir in ka badan 250mm, iyadoo laba xabbadood oo 2 * cajalado caag butyl 20mm at dhabta dhamaadka wadajir ah.
jiingado FRP jiingado
Sheets FRP saqaf